Amazon dia manapaka ny sasany amin'ireo Kindle hatramin'ny 40 euro | Ireo mpamaky rehetra
Amazon dia manapaka ny sasany amin'ireo Kindle hatramin'ny 40 euro
Ny 11 Jolay manaraka dia hotanterahina ny Amazon Prime, andro noforonin'i Amazon tenany ary hanolorany vokatra marobe miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana. Na eo aza ny zava-misy mbola misy ora hankalazana an'ity andro tsy manam-paharoa ity dia efa manana tolotra maro azo amidy ao amin'ny magazay virtoaly lehibe izahay, mieritreritra ny hanafana ny motera na ny poketra izahay.
Ny sasany amin'izy ireo dia hita ao amin'ny faritra famakiana nomerika, izay fitaovana Kindle marobe, nohavaozina, izay fantatrao tsara fa vokatra atolotry Amazon amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny hoe vaovao izy ireo, nahita ny vidin'izy ireo nampidina hatramin'ny 40 euro.
Manaraka izany dia asehonay anao ny Kindle izay hitanay amin'ny vidiny ambany noho ny mahazatra;
Voyage Kindle miaraka amin'ny vidiny 129 euro (ny vidiny mahazatra dia 169 euro)
Kindle Paperwhitee miaraka amin'ny vidiny 79,99 euro (ny vidiny mahazatra dia 10,99 euro)
Ahoana ny hevitrao amin'ny fihenam-bidy nataon'i Amazon tamin'ny fitaovana Kindle ora vitsy taorian'ny nanombohan'ny Amazon Prime?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity, amin'ny forum na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Amazon dia manapaka ny sasany amin'ireo Kindle hatramin'ny 40 euro
Boky fahadimy an'i Grey